Xaquuqda iyo waajibaadka labada is-guursanaya | Samfunnskunnskap.no
Qayb ka mid ah sharciga guurka
Qof kasta oo ka weyn 18 sano, oo aan hore u guursan, sharcina ku jooga Norway wuu guursan karaa.
Guurku waa inuu ku dhisnaadaa xuriyad. Dumarka iyo raggu way u siman yihiin inay doortaan qofkii ay doonaan inay guursaadaan. Shacigu wuxuu dhigayaa in qofkii qasab ama hanjabaad isku dayo inuu qofku guursado qof uusan doonayn in lagu xukumayo ilaa lix sano oo xarig ah. Qofkii wax ka ogaa ama ka qaybqaato hanjabaadda guurka qasabka sidoo kale isna waa lix sano
Haddii uu qofku doono inuu ka guuro xaaskiisa wuxuu dalban karaa kala tag. Markii kala maqnaataan kala tag owgeed, adiga iyo xaaskaadu waxaad dalban kartaan furiin. Haddii aadan dalban kala tag, laakiin aad kala guurtaan adiga iyo xaaskaagu muddo labo sano ah, waxaad dalban kartaan furiin
Qofku wuxuu dalban karaa furiin, isagoon dalban marka hore kala tag, waa haddii labada is qaba ama caruurta hanjabaad dil ama ciqaab, ama ay ka baqayaan in naftooda wax la gaarsiiyo. Sidoo kale qofku wuxuu dalban karaa furiin, haddii guurka uu aha amid qofka lagu qasbay ee uusan raali ka ahayn markii uu guurku dhacayey
Labada qofood ee isqabaahi waxaa saaran masuuliyad isku mid ah xagga xanaanada qoyskooda. Waxay ka mas`uul ka wada yihiin dhaqaalaha reerka, iyo ineey ka wada shaqeeyaan sidii reerku wanaag ugu wada noolaan lahaa. Laakiin siyaalo kale gedisan ayey arinta u fulin karaan. Sida iyagoo shaqeeyo si ay u helaan dhaqaalihii reerku ku noolaan lahaa, ama guriga ka shaqeeyo oo caruurta xanaaneeyo, ama si kale reerka daryeelkiisa uga qaybqaata. Xaaska mararka qaarkood wuxuu waydiisan karaa ninka ama naagta qoyska inuu bixiyo dhaqaalaha reerku u baahan yahay. Odobka § 39 ee sharciga guurku wuxuu dhigayaa in ay waajib tahay in reerka isqabaa ay isku sheegaan dhaqaalaha soo gala qof walba. Xaaska reerku qof kale wuu waydiin kara daqliga ku jira bangigiisa ama warqadda sisaabxirka sanadkii
Yaa iska leh waxa reerka is guursado ka dhaxeeya? Waxyaalaha qofku horey u lahaa intii uusan guursan qof kale isaga ayaa iska leh, sidoo kale qofku wuxuu gooni u lahaan karaa, wixii uu dhaxal ku helo, ama hadiyad lagu siiyo, ama uu isagu iskiis u soo iibsado. Wixii labada isqabaa soo wada iibsadan, ama wixii reerku guriga u soo iibiyaan way wada leeyihiin
Sharciga qoyska ayaa guurka sharci ah ka dhigaya guurka. Dadka wada nool lama mid aha xaquuqda iyo waajibaadka labada is qaba. Sidaa daraadeed waa in labada wada nool ay samaystaan heshiis wada noolaasho ah. .